एल पी ग्याँस किन तरल हुन्छ ?
काठमाडौं । आधुनिक इन्धनको रुपमा एलपी ग्याँसले मानव जीवनमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटिसकेको छ ।
हाम्रो जिब्रोले खानेकुराको स्वाद कसरी थाहा पाउँछ ?
काठमाडौं । हामीले खाएको खानेकुराको स्वाद जिब्रोले थाहा पाउँछ, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । जिब्रोमा रहेका टेस्ट बडहरुको मद्दतले हाम्रो जिब्रोले कुनै पनि कुराको स्वादका बारेमा थाहा पाउँछ ।
काठमाडौं । संसारमा रहेका विभिन्न प्राणीहरुमा मानिसमा भन्दा विशिष्ट क्षमताहरु रहेको पाईन्छ र यी विशिष्ट क्षमताहरु पनि भिन्न भिन्न जनावरहरुमा भिन्न भिन्न प्रकारका हुन्छन् ।
काठमाडौं । यदाकदा हामीले आकाशबाट माछा वर्षिएको समाचार सुनेका छौं ।
अमेरिकी बैज्ञानिकले पत्ता लगाए नयाँ ग्रह, यस्तो छ नालीबेली
काठमाडौं, असार २१ । बैज्ञानिकहरुको टोलीले सौर्यमण्डलमा प्लुटो भन्दा पनि निकै टाढा अर्को एउटा ग्रह रहेको पत्ता लगाएका छन् । जुन ग्रह प्लुटो भन्दा आकारमा केही सानो रहेको र यो पृथ्बीबाट ४ अर्व माइल टाढा रहेको पत्ता लगाएका हुन् ।
काठमाडौं, जेठ २४ । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा सुंगुरभित्र मानव अंगहरुको विकास गराउने प्रयास थालिएको छ । वैज्ञानिकहरुले पाचन ग्रन्थीको निर्माणका लागि सुंगुरको भ्रूणबाट डिएनएका क्रमहरुलाई हटाइरहेका छन् । त्यसको सट्टा अन्य कोषहरु निर्माण गर्ने स्टीम कोष हालिरहेका छन् ।
काठमाडौँ, जेठ ९ । के तपाईलाई अग्लो हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । निःशन्देह अझै पनि धेरै मानिस अग्लो हुन नै मन पराउँछन् । अग्ला मानिस धेरै हिड्न सक्ने, आर्कषक र सफल हुने आम विश्वास छ । त्यस्तै पछिल्ला दिनमा महिलाको उचाईलाई धेरै महत्व दिइन्छ । अग्ला महिला पुरुषको तुलनामा अझ बढी आकर्षक देखिन्छन् भन्ने मान्यताले पनि आम महिलामा उचाई बढिदियोस् भन्ने चाहना बढिरहेको पाइन्छ । हो, मानिसहरु आफ्नो उचाईबारे गुनासो गरिरहेकै बेला होचो हुनु ९ पुड्को होइन, औषत उचाइ० स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक रहेको एक अध्ययनले दर्शाएको छ ।
के हो जिका भाइरस ? कहाँबाट आयो ? असर के–के ?
काठमाडौं, वैशाख ३० । सृष्टिको सुरुदेखि नै प्रकृति र मानिसबीच अत्यन्त रोचक सम्बन्ध छ । कहिले प्रकृति त कहिले मानिसले गरेको अन्वेषण अगाडि–पछाडि हुनेक्रम लुकामारीझैं चलिरहेछ । एकार्कामा मानवीय आविष्कार र प्रकृतिका चुनौती नङ मासुझैं छ ।
काठमाडौं । पृथ्वीमा जीवन छ किनभने जीवन अनुकुल वायुमण्डल छ अनि पानी पनि छ । जीवनको लागि वायुमण्डल हुनु जरुरी छ । लामो समयदेखि मानिसले पृथ्वीबाहेक ब्रम्हाण्डका अन्य स्थानमा समेत जीवन भएको हुन सक्ने अनुमान गर्दै आएका छन् । १९ औं शताब्दीमा खगोलशास्त्रीहरुले पनि चन्द्रमामा बुद्धिमान प्राणीहरु हुनुपर्छ भन्ने सोच राखेका थिए । तर पछि भएका वैज्ञानिक अनुसन्धानहरुमा चन्द्रमामा बुद्धिमान प्राणी त के, कुनै पनि जीव छैन भन्ने भन्ने पत्ता लाग्यो । चन्द्रमामा वायुमण्डल नै छैन र पानी पनि छैन भन्ने प्रमाणित नै भयो ।